Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga One Device Android in kale
Aad qalab Android jir ah muddo sanado ah, oo waxaa la gaaray waqtigii la dallacsiiyo? Helitaanka qalab dhaldhalaalaan Android, sida Samsung Galaxy S4, waa wax xiiso leh, laakiin sidoo kale aad galisaa. Inkastoo Android bixisaa fududahay in kaarka SD ah helaan, waxaad weli u arkaan in ay adagtahay si ay u gudbiyaan xogta, sida app iyo SMS ka Android inay Android in Dufcaddii. Xoqo madaxiinna oo ku saabsan? Ha welwelin. Halkan waa fursad aad u. Dhammaan waxa aad u baahan tahay waa in la siiyo Android inay Android qalab kala iibsiga xirfad shot a. Ka hor inta in, eegno waxa soo socda hage si aad wareejinta xogta phone fudud oo ammaan ah.
Xogta laga Android wareejiyo Android 1 Click!
Qalabka Android inay Android kala iibsiga waa wanaagsan yahay, waayo, waxaad si ay u gudbiyaan dhammaan dadka ay khuseyso, barnaamijyadooda, jadwalka taariikhda, sawiro, video, abuse wac, music iyo SMS ka Android inay Android in mid ka mid click.
Xiriirada Transfer labada telefoonka iyo xisaab in qalabka kale ee Android, iyadoo Guda wac buuxa.
Oo dhan barnaamijyadooda ku Photo kaydinta iyo kaarka SD dhaqaaq qalab cusub Android si toos ah.
Bedelka taariikhda xusuusta telefoonka iyo Gmail u dhexeeya qalabka Android.
SMS Nuqul ka jir Android inay ka mid cusub ee previewing iyo ka dib SMS.
Demi oo dhan files warbaahinta, waxaad tidhaahdaan, sawiro, video iyo music ka Android inay Android.
Great u Samsung, Motorola, Sony, HTC, Huawei, ZTE, LG, Acer oo dheeraad ah.
Haddii aad tahay qof user Mac ah, fadlan tag Wondershare MobileTrans u Mac .
Quick oo Easy si ay u gudbiyaan
Waxay leedahay interface user dareen leh. No talaabooyin adag. Kaliya 1 click, xogta oo dhan waxaa loo wareejin doonaa qalab cusub Android.
Bedelka Apps, Xiriirada, iwm
Waxay kaa caawinaysaa in aad barnaamijyadooda, SMS, xiriirada, jadwalka taariikhda, abuse wac, music, video iyo sawiro ka Android wareejiyo Android aan ka kaaftoomi kasta.
Work for hindisooyin badan
Qalab badan oo Android si buuxda ay taageerayaan, oo ay ku jiraan HTC, Sony, Samsung, LG, Motorola, Google, Huawei iyo in ka badan.
Sidaa daraadeed, waxaad si fudud u wareejin karaan macluumaadka u dhexeeya telefoonada Android, iyadoo aan loo eegayn waxa telefoonada xambaarsan yihiin.
Android inay kala iibsiga Android way fududahay! Baro faahfaahinta hoos ku >>
Marka aad gasho xisaab ah, sida Google, Facebook, Twitter, xiriirada iyaga in sidoo kale loo wareejin doonaa. Sidaas darteed, hubi in haddii aad rabto in iyaga lagu wareejiyo ama aan. Haddii aadan, ha saxiixin in xisaab ka hor suuqa kala iibsiga ee Android inay Android.
Tallaabada 1. Run Android si ay Android Transfer Tool
Waxa ugu horeeya waa in la rakibo iyo ordi Wondershare MobileTrans ah. Marka ay suuqa kala hoose u muuqataa, riix Start si ay u muujiyaan taleefanka si uu furmo suuqa telefoonka.
Tallaabada 2. Ka Labada Qalabka Android Connected
Connect aad laba qalabka Android inay kombiyuutarka via fiilooyinka USB. Ka dib markii la aqoonsan yahay, qalabka Android aad la soo daabici doonaa dhigsan labada dhinac ee uu furmo suuqa.
Tallaabada 3. Transfer Xiriirada, Photos, Videos, Music, SMS, Call Log, Calendar iyo Apps ka Android inay Android
Inta u dhaxaysa laba telefoonada Android soo bandhigaan dhammaan waxyaabaha aad ku wareejin karaa. Waxaad uncheck karaa content kasta inaad Kahataan si ay u gudbiyaan. Markaas, riix Start Copy.
Xogta laga iPhone wareejiyo Android
Nuqul Xogta laga Android inay iPhone
Contents ka Symbian dhaqaaq Android
Ka BlackBerry Demi Data in Android
Bedelka Music ka iPod in Android?
Xogta laga Nokia Bedelka in Samsung
Faylal ay kala soo wareegeen Android inay macruufka
Nuqul Xogta laga iPad in Android
Android VS iPhone: Waa kuwee ka mid ah waa Better
Import Xiriirada in Phone ah Android
> Resource > Android > Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga Android inay Android